HMD Global ga-ebute ihe ngosi igwefoto ọhụrụ na Nokia 7.3 | Gam akporosis
HMD Global ga-amalite na Nokia 7.3 ọhụụ igwefoto ọhụụ ọhụụ ahụbeghị
HMD Global anaghị egbochi coronavirus wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ na smartphones ndị ọzọ. Abụọ n'ime ha bụ Nokia 9.3 na 7.3, nke anyị kwuru na nso nso a ma na-atụ anya na a ga-eme ka ọ bụrụ onye isi n'ahịa n'oge ọ bụla na nkeji nke atọ nke afọ a, oge nke gụnyere July, August na September.
Esịtidem isi mmalite nke ụlọ ọrụ na-ekpughe na ọ na-emebe igwefoto imewe prototypes, otu onye nke ga-ahụ ìhè na Nokia 7.3.
O doro anya na usoro arụmọrụ a nke na-esote ga-eji usoro okirikiri azụ nke ga-emejupụta igwefoto igwefoto anọ maka foto. Ọdịdị nke usoro ihe a ga-adịtụ iche na ụlọ ndị ọzọ dị okirikiri ugbu a na ahịa; Otu ihe atụ bu nke Nokia 5.2 buuru. O sina dị, a na-eche na onye nrụpụta ahụ nwere ike ịnwe atụmatụ dị iche.
Nkebi a ga - eduga a Isi ihe mgbochi 64 MP na a ga-agbatị ya n'akụkụ eriri gburugburu n'ime modulu ya na ihe mmetụta 12 MP ọzọ; ha abụọ dị nnọọ iche, na nha, site na abụọ ndị ọzọ fọdụrụ, nke bụ 2 MP ma dị n'akụkụ aka ekpe.
Ọ dịkwa mma ịmara na nhazi foto foto ahụ dị ka nke ahụ dị na Nokia 8.3 5G, ma ọ bụghị mkpuchi maka ihe atụ a na-esote, ya mere enweghi ọtụtụ atụmanya ịme, na obere mgbe a ka nwere ọnwa anọ ga-aga tupu anyị amara ya.
Igwefoto selfie mobile ga enwekwa mkpebi di elu, na-aga site na ihe mmetụta 20 MP nke ihe nlereanya 2019 gaa na ihe mmetụta 24 MP ma ọ bụ ọbụna 32 MP. N'aka nke ya, foto n'ozuzu ya, n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala, ga-eji ọnọdụ abalị ka mma karịa, nke ga-ekwe nkwa nsonaazụ ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HMD Global ga-amalite na Nokia 7.3 ọhụụ igwefoto ọhụụ ọhụụ ahụbeghị